ဓားခုတ်မှု – Eleven Media Group
Posted on September 12, 2018 September 12, 2018 by ကြည်နိုင်၊ သီဟအောင်
အခင်းဖြစ်နေရာအား တာဝန်ရှိသူများ လာရောက်စစ်ဆေးနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ကြည်နိုင်)
တာမွေမြို့နယ် တာမွေဈေးရှေ့တွင် အုပ်စုနှစ်စု ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားပြီး ဓားခုတ်ခံရသောကြောင့် အခင်းဖြစ်နေရာတွင် တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိမှု စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် ည ၁၀ နာရီခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကနဦးသတင်းများအရ သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တာမွေမြို့မ ရဲစခန်းသို့ သွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ရာ ကျူးလွန်သူများကို လိုက်လံဖမ်းဆီးဆဲဖြစ်ပြီး အခင်းဖြစ်စဉ် အသေးစိတ်အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းထုတ်ပြန် ရေးကိုမေးမြန်းရန် ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
“တစ်ယောက်သေပြီး နှစ်ယောက်ဒဏ်ရာရတယ်၊ အခုတော့ ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကို လိုက်ဖမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်။ ဖြစ်စဉ်ကို တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကိုမေးပါလို့ တာဝန်မှူးကပြောတယ်” ဟု တာမွေ မြို့မရဲစခန်းမှ တာဝန်ကျရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ည ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်က ပြောသည်။
ရန်ဖြစ်ပြီး ဓားခုတ်မှုဖြစ်ပွားသည့် နေရာမှ ဓားအရှည်နှင့် ဓားအတို လေးချောင်းခန့် တာမွေမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ သိမ်းဆည်းရမိသည်ကို Daily Eleven မှ သတင်းသွားယူရာတွင် တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
တာမွေဈေးအနီးနေထိုင်သူတစ်ဦးက “အုပ်စုနှစ်စု ရန်ဖြစ်တာမှာ ဓားတွေနဲ့ ၀ိုင်းခုတ်ကြတယ်လို့ သိရတယ်။ တခြားမြို့နယ်က လူတွေနဲ့ တာမွေမြို့နယ်က လူတွေလို့တော့ ကြားတယ်။ ညနေကတည်းက ဂိမ်းဆိုင်တစ်ခုမှာ ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြသေးတယ်လို့လည်း ကြားမိတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်အား တာမွေမြို့မရဲစခန်းမှ ဆက်လက်စစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး ကျုးလွန်သူများအား ဖမ်းဆီးရမိရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
အုပ်စုနှစ်ဖွဲ့၏ အခင်းဖြစ်ပွားမှုမှ ရရှိသည့် စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမည်။
Posted in Headline, NewsTagged တာမွေမြို့နယ်, ဓားခုတ်မှုLeaveaComment on တာမွေမြို့နယ် တာမွေဈေးရှေ့တွင် အုပ်စုနှစ်စု ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားပြီး ဓားခုတ်ခံရသောကြောင့် တစ်ဦးသေ၊ နှစ်ဦးဒဏ်ရာရ
Posted in NewsTagged ဓားခုတ်မှု, မတ္တရာမြို့နယ်LeaveaComment on တရားခံဖမ်းရန် သွားသည့် ရဲတပ်ကြပ် တစ်ဦးအား လူလေးဦးက ဓားဖြင့် ၀ိုင်းခုတ်မှု မတ္တရာမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွား
Posted in NewsTagged ဓားခုတ်မှုLeaveaComment on မြ၀တီမြို့နယ်​​တွင် အရက်​အတူ​သောက်​ရာမှ စကားများကာ ဓားခုတ်​မှုဖြစ်​ပြီး တစ်​ဦး​သေ၊ နှစ်​ဦး ဒဏ်​ရာရ
နိဗ္ဗာန်ဈေး လက်မှတ်တိုးရာမှ စကားများရန်ဖြစ်ပြီး လင်မယားနှစ်ဦးအား အခြားနှစ်ဦးက ဓားဖြင့်ခုတ်၊ တုတ်ဖြင့်ရိုက်မှု ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တွင် နိဗ္ဗာန်ဈေးလက်မှတ် တိုးဝှေ့ရာမှ စကားများရန်ဖြစ်ပြီး လင်မယားနှစ်ဦးအား အခြားလူနှစ်ဦးက ဓားဖြင့်ခုတ်၊ တုတ်ဖြင့်ရိုက်နှက်မှု နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ သာကေတမြို့နယ် ကျူးကျော်ရပ်ကွက်နေ ကို…. (၃၄ နှစ်) နှင့် ၎င်း၏ဇနီး ဖြစ်သူ မ…. (၂၃ နှစ်) တို့သည် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် သီတာဆိပ်လမ်းမပေါ်တွင် နိဗ္ဗာန်ဈေး လက်မှတ်တိုးရာမှ စိန်ကုလား၊ ဝေဠုကျော်ဆိုသူတို့နှစ်ဦးနှင့် စကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ကြကြောင်း၊ ထိုသို့စကားများစဉ် ကို…. (၃၄ နှစ်) နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ မ….(၂၃ နှစ်) တို့အား စိန်ကုလားဆိုသူက အရှည်တစ်တောင်ခန့်ရှိ ဓားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဝေဠုကျော်ဆိုသူက အရှည်တစ်တောင်ခန့်ရှိ သစ်သားတုတ်ဖြင့်လည်းကောင်း ၀ိုင်းဝန်းထိုးခုတ်ရိုက်နှက်ပြီး ထွက်ပြေးသွားကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ ဓားဖြင့်ခုတ်၊ တုတ်ဖြင့်ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရသဖြင့် ကို…. (၃၄ နှစ်) မှာ ဦးခေါင်းချို စောင်းပြတ်ရှ၊ ၀ဲလက်ဖျံပြတ်ရှ၊ ယာမျက်လုံး ဖူးရောင်ဒဏ်ရာနှင့် မ…. (၂၃ နှစ်) မှာ ဦးခေါင်းထိပ် ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ လေးချက်တို့ရရှိခဲ့ကာ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် အတွင်းလူနာများအဖြစ် တင်ပို့ကုသထားရကြောင်း သိရသည်။
“ဓားနဲ့ခုတ်၊ တုတ်နဲ့အရိုက်ခံရတဲ့ လင်မယားကတော့ခု ဆေးရုံမှာပါ။ စိုးရိမ်ရတဲ့ အနေအထားတော့ မရှိတော့ဘူးလို့ သိရတယ်။ နိဗ္ဗာန်ဈေးလက်မှတ်တိုးကြရင်းနဲ့ ဖြစ်တာပါ။ ကျူးလွန်သူနှစ်ဦးကို ဖမ်းမမိသေးပါဘူး။ ဖမ်းဆီးရမိဖို့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို ပုဇွန်တောင်မြို့မရဲ စခန်းက (ပ) ၂၆၉/ ၂၀၁၇၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၂၆/ ၃၂၅ /၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး ကျူးလွန်သူများအား ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged ဓားခုတ်မှုLeaveaComment on နိဗ္ဗာန်ဈေး လက်မှတ်တိုးရာမှ စကားများရန်ဖြစ်ပြီး လင်မယားနှစ်ဦးအား အခြားနှစ်ဦးက ဓားဖြင့်ခုတ်၊ တုတ်ဖြင့်ရိုက်မှု ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွား
မောင်တောခရိုင်အတွင်း နေ့စားလပေး သင်ကြားရေး အကူဆရာ လျှောက်ထားသူ ဘင်္ဂါလီ ၉၀၀ ကျော်ရှိ